Kenya oo gashay xaalad dhaqaalo xumo iyo Soomaaliya iyo Tanzania oo cadaadis saaray | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Kenya oo gashay xaalad dhaqaalo xumo iyo Soomaaliya iyo Tanzania oo cadaadis...
Kenya oo gashay xaalad dhaqaalo xumo iyo Soomaaliya iyo Tanzania oo cadaadis saaray
Dowladaha Somaaliya iyo Tanzaniya ayaa gaaray go’aano ay xayiraad ku saareen duulimaadyada iyo xiriirka ganacsi ay lalahaayeen Kenya, taas oo dhalisay inay ganacsatada Kenya cadaadis saaraan dowldooda.
Kadib markii Kenya ay ku adeysaty in la karantiilo dadka reer Tanzaniya ee imaanaya dalkeeda mudda 14 maalmood, taa badalkeeda Tanzaniya ayaa joojisay gabi ahaan duulimaadyadii Fly540 iyo Safarilink Aviation
Soomaaliya oo weli xayiraada ka qaadin duulimaadyadii ganacsiga Jaadka ayaa ayagana dhaliyay dhaqaalo xumo oo ganacsatada Kenya ku cadaadinayaan dowladdooda inay wax ka badalaan xiriirka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Tanzaniya.
Dowladda Soomaliya ayaa shuruud hordhigtay duulimaadyada ganacsiga jaadka ee Kenya oo ay ugu horeyso inay joojiso duulimaadyada sii maro wajeer ee lagu baaro muwaadiniinta Soomaliya, canshuuro lagu soo rogay jaadka iyo ganacsiga Soomalida taas oo wali Kenya aysan fulin.
Ugu dambeentii waxaa sii kordhayo cadaadiska ganacsatada Kenya ay ku haayaan doowldooda si wax uga qabtaan xaalda dhaqaalo xumo uu dalkooda galay.
dowladda Soomaaliya ayaa hordhigtay Kenya sharuudo dhowr ah oo ay tahay in ay fuliso si loogu oggolaado ganacsatada Khaad ee Kenya in ay Jaadka u soo dhoofiyaan Soomaaliya.